साम्राज्ञी भनिन्-‘म मेरै ठाउँबाट जान्छु, मलाई चाहिएन यो युट्युब । किनकी जहिले पनि हामीलाई उचालेको छ, उडाएको छ । हामीलाई नराम्रो देखाएर पैसा कमाएको छ । अहिले पैसा कमाइरहेको छ, हाम्रोबारेमा नराम्रो लेखिरहेको छ ।’ – Sandesh Munch
July 1, 2020 189
१७ असार । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाहले केही समय अगाडी इन्स्ट्राग्राम मार्फत ठूला ब्यानरमा आफूले भोगेको दुर्व्यवहारको विषयमा भिडियो सार्वजनिक गरेसंगै हाल कलाकारहरु दुई भागमा बाडिँएका छन् । कोरोनाका कारण सेलाएको नेपाली चलचित्र जगत नायिका साम्राज्ञी र अभिनेता भुवनको रस्साकस्सीले गर्मिलो बन्न पुगेको छ ।
साम्राज्ञीले इन्स्टाग्राममा आफूलाई दुर्व्यवहार गरेको भन्दै पहिलो भिडियो सार्वजनिक गरेसँगै भुवनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाएका थिए । भुवनले साम्राज्ञीको भिडियो पश्चात सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जालमा जस्तो अभिनय फिल्ममा गरे हुने नि भन्दै, खान नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रोइकराइ गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छिन् ? जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने ?’ आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
भुवनको स्टाटसपछि अभिनेत्री साम्राज्ञीले इन्स्टाग्राममा दोस्रो भिडियो सार्वजनिक गर्दै दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्ति भुवन केसी नै हो भन्ने कुराको संकेत गरेकी छिन् । जसले हाल नेपाली सिने क्षेत्रका कलाकारहरु भुवन र साम्राज्ञीको पक्षमा बाँढिएका छन् । धेरै जसोले यस विषयमा सोध्दा समेत बोल्न नमानेपनि केहीले भने सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राखेर नै सर्मथन जनाएका छन् ।
नायिका शाह र निर्माता केसीबीचको टकरावकोबीचमा निर्माता र गायक अर्जुन कुमारले अभिनेता नाजिर हुसेन, अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटी र नम्रता सापकोटाले साथ दिएका छन् , भने केही कलाकारले आफ्नो धारणा नराखी साम्राज्ञीको भिडियोलाई सेयर गरेका छन् । नेपाली फिल्ममा नेपोटिजमले ठूलै रोल खेलेको भन्ने कुरा उठिरहेका बेला फिल्म लेखक एवं निर्देशक कुमार भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘जिस थाली मे खाया उसी मैं छेद किया,लाई राम्रै ट्रान्सलेट गर्नु भएछ भुवन दाईले ।’भन्दै निर्माता केसीको नै साथ दिएका छन् ।
नायिका शाह र निर्माता केसीको टकरावको विषयमा कुरा गर्न खोज्दा केही कलाकारहरुले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । साथै नायिका शाह र निर्माता केसीको समेत फोन उठने । नायिका शाहले इन्स्टाग्राममा दोस्रो भिडियो सार्वजनिक गर्दै आफू युट्युबका हेडलाइनले थकित भएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘हामी अभिनेत्रीहरुले हाम्रो कुरा सुनाउन खोजेका थियौ‌ं पहिला पनि । तर हेडलाइन हेर्दा नै घिन लाग्ने के’, उनले भनेकी छिन्, ‘दुर्व्यवहारबारे २ वर्ष अगाडि बोल्न खोज्दा गाली मात्र पाइएको छ । हामीले बोलेको कुरालाई नराम्रो बनाएर पेस गर्ने युट्युब मलाई चाहिएन । म थाकिसकें ।’
निर्माता केसी र आफ्नो सम्बन्धबारे धेरै मिडियाबाट फोन आएको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘म मेरै ठाउँबाट जान्छु, मलाई चाहिएन यो युट्युब । किनकी जहिले पनि हामीलाई उचालेको छ उडाएको छ । हामीलाई नराम्रो देखाएर पैसा कमाएको छ । अहिले पैसा कमाइरहेको छ, हाम्रोबारेमा नराम्रो लेखिरहेको छ । हामीलाई पनि पैसा देउ, साच्चै भन्या ।’ Source: News24
Prevअस्पतालमा पेट्रोल बम प्रहार : बिरामीको भागाभाग
Nextओलिको राजिनामा मागे पछि जनता सडकमा ‘हामीलाई नेकपाको धेरै माया छ, नेताहरु मिल्नुहोस्’
कोरोनालाई खेलाँची ठान्दैछ काठमाडौं !
ढाड कम्मर दुख्छ ? यी घरेलु उपाय गर्नुस